एप्पल वाच - एप्पल वाच | म म्याकबाट हुँ
अन्त पछि दुई लम्बाइअफवाहहरु को पूर्ण वर्ष र सम्भावित एप्पल आईवाचको बारेमा अनुमान, अन्तिम क्यानोटमा मंगलबार सेप्टेम्बर,, २०१ Apple एप्पलले हामीलाई यसको साथ प्रस्तुत गर्‍यो स्मार्ट घडी। यस घडी जुन हामी सबैले सोचेका थिए iWatch कहलाइनेछ किनकी धेरै प्याटेन्टको कारण एप्पलले यो नाम प्रयोग गर्यो। Apple Watch सुक्नु
कम्पनीका सीईओ, टिम कुकले सेप्टेम्बर,, २०१9मा केनोटमा प्रस्तुत गरे जुन उनले कम्पनीमा नै प्रसिद्ध बनाए जब लेट स्टीव जॉब्सले यसमा उल्लेख गरे। «एउटा कुरा ...» यो अझ एउटा कुरा टिम कुकले एप्पलका सीईओको रूपमा आफ्नो इतिहासमा पहिलो हो र अपेक्षा गरेका जनतालाई फेरि सुन्न प्रोत्साहित गर्न छोडेनन्। तिनीहरूलाई के धेरै मनपर्‍यो.
Apple एप्पल वाच मोडेलहरू
एप्पलले यस नयाँ वाचलाई यसको सार्वजनिक आनन्दमा प्रस्तुत गर्दछ र सुरूवात गरिएको छ तीन बिभिन्न मोडलहरू र दुई आकारहरूबिभिन्न वर्षहरु पुरुष र महिला कलाई को लागी। को एक मोडेल इस्पात, को एक खेल मोडेल एल्युमिनियम र अर्को कल संस्करण de १ k क्यारेट सुन।
एप्पल यस प्रकार को हो भनिन्छ प्रस्तुत गरी अटकल र अफवाहहरु को अन्त राख्छ उत्तम साथी तपाईको IOS उपकरणहरू र अधिक विशेष आईफोनको लागि।
एप्पल वाच समाचार
म म्याकबाट तपाईं कम्पनीको पहिरन योग्यको पहिलो मा सबै यसको जानकारी को शुरूआत को पहिलो दिन देखि काटे स्याउ संग पाउनुहुनेछ। रमाईलो गर्नुहोस् Apple Watch र हामीसँग तपाइँको सबै खबरहरू।
द्वारा जोर्डी गिमेनेज बनाउँछ 10 मिनट .
एशियामा फेब्रुअरी १ ​​देखि १५ सम्म लुनार नयाँ वर्षको आगमनसँगै, क्युपर्टिनो कम्पनीले…
watchOS 8.4 RC ले Apple Watch चार्ज गर्ने समस्याहरू समाधान गर्छ
द्वारा टोनी कोर्टेस बनाउँछ5दिन .
हामी यो समय अन्तिम हो कि भनेर हेर्नेछौं। हामी हरेक चोटि एप्पलले नयाँ वाचओएस अपडेट जारी गर्दा भन्दै आएका छौं...
द्वारा जोर्डी गिमेनेज बनाउँछ2हप्ता .
हावा चल्ने बित्तिकै अफवाहहरू आउँछन् र जान्छन् र केहि हप्ता पहिले के सम्भव थियो अब भन्दा बढी ...
द्वारा जोर्डी गिमेनेज बनाउँछ3हप्ता .
कहिलेकाहीँ सही समयमा आकस्मिक सेवाहरूमा कल गर्दा हाम्रो जीवन बचाउन सक्छ र यो...
Apple Watch र watchOS 8.3 सँग चार्जिङ समस्याहरू
केही एप्पल वाच श्रृंखला7प्रयोगकर्ताहरूले स्तरवृद्धि पछि अपग्रेड पछि चार्जिंग समस्याहरू अनुभव गरिरहेका छन् ...
यी एक्स-रे वालपेपरहरूको साथ तपाईंको एप्पल वाच निजीकृत गर्नुहोस्
अक्टोबरको सुरुमा, iFixit का केटाहरूले नयाँ Apple Watch Series7को विघटन गर्ने परम्परागत विश्लेषण साझा गरे ...
तिनीहरूले एप्पल विरुद्ध मुद्दा दायर गरे कि एप्पल वाचले शारीरिक चोट पुर्याउन सक्छ
यदि हामीले नाफा कमाउनको लागि कुनै पनि बहानामा ठूला कम्पनीहरूमा मुद्दा हाल्ने सहजता थप्यौं भने, ...
watchOS 8.3 रिलीज उम्मेदवारको नयाँ संस्करणको मुख्य नवीनताहरू मध्ये एक यो हो कि यसले AssistiveTouch प्रकार्य थप्छ ...
के तपाइँ एप्पलले G-Shock प्रकारको घडी लन्च गर्न सम्भव देख्नुहुन्छ?
मार्क गुर्मनको भर्खरको भविष्यवाणीहरूमा हाम्रो दिमागमा रहेको अफवाहहरू मध्ये एक यो हो कि कपर्टिनो कम्पनी ...
म सधैं Casio ब्रान्डका घडीहरू द्वारा मोहित भएको छु। मसँग पहिलो क्याल्कुलेटर भएकोले, मेरो समयमा ...
द्वारा मानुएल एलोन्सो बनाउँछ2महिना .
एप्पलले तपाईंलाई राम्रो हिड्न प्रेरित गर्ने तरिका फेला पारेको छ जसलाई "हिँड्ने समय" भनिन्छ। फिटनेस +...
समाधान यदि तपाईंको एप्पल वाचले तपाईंलाई मिनी र मिकीसँग बोलेको समय बताउँदैन भने
पहिलो जेनरेशन एप्पल वाच र श्रृंखला १ एक समान छैन